Berïnson – …ho soratsoratra manainga fanahy
Tantara mandalo Posté par BerïnsonPosted on 2018-06-28 10:14
Rehefa potika tsy misy antenaina ny taloha, foana sy poakaty ny anio noheverina hamiratra, moana tsy manan-kandrandraina ny ho avy dia toa zava-poana ihany ny fiainana. Soa anefa fa mahay manavo-tena ny saina ka mamorona nofinofy manjopiaka kelin’ny angamba sy nahoana moa?, mandrotsy fitia diso fiantefa maniry ny lafatra indrindra, ny soa ho an’ny hafa, ny hiandrasan’i malala…
Penina, an’i Toetra Ràja
Fakafaka tononkalo Posté par BerïnsonPosted on 2018-05-06 10:01
Endrey izany hakanton’ny
tononkalo izay hofakafakaintsika androany, tononkalon’i Toetra Ràja, poeta miangaly
ny rafitra “teny fohy isan’an-dalana”.
Ny tononkalo dia
miresaka ny fahatapahan-kevitra hanambara ny ao am-po sy ny ao an-tsaina. Eny,
na ny miafina indrindra tsy ho voaresaky ny molotra aza, dia azo antoka fa haboraky
ny “penina” eny ihany. Asehony fa tsy misy hanakana azy tsy hanoratra, na fisaonana,
na hamoanana, na fahosana sns sns. Rehefa mavesatra sy mafonja tokoa ny mihatra
amin’ny tena ara-batana, izany dia mety ho sakana lehibe tsy
Miady rima ababcdcdefef
ny tononkalo ary ny andininy tokana nandrafetana azy dia tsotra sy mazava, tsy be
safary sy mivantana amin’izay hiantefany, “rahavako”. Ny olona antsoina hoe “rahavako”
dia olona akaiky ny tena, olona mora amborahana ny ao anaty. Koa na eo
aza ny antony maro mety hanakana ny molotra tsy hiloaka, dia hahita fomba hafa
hamoahana izay miafina sy “afenina” foana ny tena. Noho ny antony iray na hafa,
na noho “rahavako” ihany aza, dia hikorisa ny « penina », hakorisa, hasosa hilaza izay
Tsy milaza toerana sy
fotoana nitrangan’ny resaka ny tononkalo. Izany dia mahatonga ity tononkalo ity
handaitra amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra, n’aiza n’aiza ary na rahoviana na rahoviana ahatsapana
tohitra tsy ahafahana milaza ny ao am-po mangina. Ny “penina” no ho vava miteny
sy mibitsika ny lalina indrindra tsy vita hotovozina. Ny “penina” no tsy hihambahamba hisosa rehefa tsy afaka mamindra intsony.
manitikitika ny saiko ihany eto am-pamaranana dia ny hoe: inona àry ny hafatra
tian’ny mpanoratra ambara amin’ny alalan’ny tononkalo? Azo raisina hoe manome toky
izy, nefa azo adika koa hoe mampitandrina. Na ahoana na ahoana, noporofoin’ny
mpanoratra tokoa fa nisosa ny penina ary nahasoratra boky mihitsy aza. Efa
anananao ve ny bokin’i Toetra Ràja Tiako, tiako foana? Ny fitiavana manoratra tokoa
no misesika mahatohitra izay mety ho sakana rehetra.